Xildhibaane isbaddalka u hiilli oo Score Cusub dhig adigoo jabinaya kana Tallaabaya Xadkii la dhigay | dayniiile.com
Home WARKII Xildhibaane isbaddalka u hiilli oo Score Cusub dhig adigoo jabinaya kana Tallaabaya...
Xildhibaane isbaddalka u hiilli oo Score Cusub dhig adigoo jabinaya kana Tallaabaya Xadkii la dhigay
Xildhibaane isbaddalka u hiilli oo Score Cusub dhig adigoo jabinaya kana Tallaabaya Xadkii la dhigay iyo kuwa Aamminsan iney ayagu xaq u leeyihiin Hoggaanka Talada Dalka.
Yaa u diiday iney dalka Madaxweyne ka noqdaan wiilasha Ceel hindi Xamar weyniyo kuwa Baydhaba oo u oggolaaday wiilasha Kaaraan Gediyo Qardho.
Xildhibaane Codkaaga ku cibaadeyso oo adduun iyo aakhiraba ku hel sharaf iyo Karaamo leh Tariikh lagugu xasuusto oo dalka badbaadadiisa aad ku muteysatay.
Soomaaliya Soomaalibaa leh Soomaaliduna ma aha koox gaar ah oo dhibaatada Soomaalida u taagan balse waxaa Soomaali ah waddaniga dhabta ah oo la hubo inuu dalka iyo dadka ugu shaqeynayo si daacad ah oo aan qabiil ku saleysneyn.
Soomaaliga dhabta ah waa halyeyga soo Celin kara Dowladnimadii Qaran oo ay meesha ka saareen kooxaha isku haysta mar walba Hoggaanka Talada Dalka oo aan u oggoleyn Soomaalida kale Hoggaanka Talada Dalka.
Soomaaliga dhabta ah waa kan Ammaanada xafidi kara oo aan hantida dadweynaha boobeyn oo dalkiyo Dadka horumarin kara oo u dhisi kara Ciidan Qaran oo aan Ciidan Beeleed ahayn isla markaana ka haqab tiri kara Bulshada Baahiyaha guud ee adeegyada arrimaha Bulshada.
Musharrax Madaxweyne Hassan Ali Khaire waa Soomaaliga dhabta ah ee ay Hoggaankiisa u baahan yihiin Ummadda Soomaaliyeede Xildhinaane Codkaaga sii waayo waa kan kaliya ee dhisi kara dowlad Caalamka la jaan qaadi karta oo waddammada horumaray garab istaagi karta Soomaaliyana ka dhigi karta Dal adduunyada loogasoo shaqo tago.
Xildhibaane Codkaaga Dalka iyo Dadka ugu hiilli oo ku Cibaadeyso Maanta ama Samee waxaad doonto oo Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed dib u celi.
Previous articleSaraakiil & Askar ku geeriyootay dagaalka Dhuusamareeb
Next articleMadaxweynihii dalka Imaaraadka Carabta oo geeriyooday